घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू यसका लागि उनीहरुसँग भेटघाट गर्दछन्
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रोसँग उपस्थित छ "Rodri"। हाम्रो Rodrigo Hernandez Childhood Story plus Untold जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता आफ्नो बचपनको समय सम्म।
यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्ध छ। एटिभो र मार्काको लागि एल डेमानमारका क्रेडिटहरू।
यो विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध, जीवन शैली र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि आदि समावेश छ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक एथलेटिक हो, बक्स मिडफिल्डर को लागी बक्स जो सर्जियो बसुकेट को उत्तराधिकारी को रूप मा देखाएको छ। तथापि, केवल केहि केहि Rodrigo Hernandez को जीवनी मा विचार छ जो एकदम दिलचस्प छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
यसका लागी, प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्दै, उहाँका पूरा नामहरू छन्; Rodrigo Hernandez Cascante। Rodri, को रूप मा वह लोकप्रिय रूप से जाना जाता है या बुलाया, सिर्फ एक उपनाम है। तपाईंलाई थाँहा थियो… नाम "होर्निया" नामक उनको बुबाको परिवारले बोलाइएको नाम हो, जबकि "कास्सेन्ट" नामको आमाको परिवार हो।
स्पेनिश रिजर्भेसनको अनुसार, Rodrigo नाम भन्छ: Rodrigo Hernandez Cascante। उहाँ स्पेनको म्याड्रिडमा जून 22 को 1996nd दिनमा जन्मेको थियो। आफ्नो पारिवारिक मूलको सन्दर्भमा, Rodri मद्रिलिनको एक शुद्ध मूल निवासी हो। यो शाब्दिक अर्थ हो कि त्यो एक देशी वा म्याड्रिडको निवास हो।
स्पेनी फुटबल सिटी म्याड्रिडमा एक सानो केटाको रूपमा बढ्दै, यो रोरी को लागि सुन्दर खेलको साथ प्रेम मा गिरने को लागि सामान्य थियो। उहाँ उन साना बच्चाहरु मध्ये एक थिए जो फुटबल बल मा केहि molded र यो दिन को लात। फुटबलको शुरुवाती सुरुवात दिइयो उनको आमाबाबुले उनीहरूको लागि चाहन्थे। यद्यपि, आश्वासनको साथ आयो Rodri द्वारा उनको शिक्षा फुटबल प्रशिक्षण को लागि समझौता नहीं।
यसका लागी, शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
एक अकादमिक परिवारमा, स्पेनको राजधानीमा Rodri ठूलो भयो। उनी लगातार निरन्तर शिक्षाको महत्त्वलाई सिकाउन थालेको थियो, एक विशेष फुटबलबाट धेरै पैसा बनाउन भोजपुरीमा उहाँलाई पछ्याउने एक विशेषता।
"मेरो आमाबाबुले मलाई केटाकेटीको रूपमा शिक्षाको महत्त्वको साथ मलाई खाना दिइरहेको छ,"
Rodri एक पल्ट एक मार्का साक्षात्कार मा प्रकट भएको थियो जहां उनको बायाँ हात मा र उनको दाहिने मा एक फुटबल बल थियो।
Rodrigo Hernandez- फुटबल र शैक्षिक विशेषज्ञ। क्रेडिट ब्रान्ड.
विद्यालय जाने जातीय रोड्रीलाई अवसरपूर्वक खेलकूदको अवधिमा प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल खेल्ने अवसर दिइएको छ। स्कूलको घण्टा पछि, उनले आफ्नो पड़ोसीमा फुटबल खेतीमा आफ्नो खाली समय बिताए र आफैलाई शिक्षा दिन थाले, एक गतिविधि जसले आमाबाबुलाई प्रसन्न तुल्यायो र उनीहरूलाई कारवाही गर्न आग्रह गर्यो।
केही समयमा, यो Rodri आमाबाबुलाई स्पष्ट थियो कि तिनीहरूका छोरो छोरा फुटबलको राम्रो लगानी थियो। यस्तो प्रेमले यो पूर्ण लाभांश भुक्तानी गर्यो किनभने रोरीलाई एटलेटिको मैड्रिडले परीक्षाको लागि बोलाइयो।
यसका लागी, प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
फुटबलको लागि रड्रिको जुनूनले उनलाई 2006 (10 को उमेरमा) देख्यो र रंगहरु उड्न र स्थानीय क्लब संग नामांकन गर्दै परीक्षा लिन थाले। रेवो मजुदडाडाले उनलाई आफ्नो क्यारियर आधार राख्ने प्लेटफार्म दिए।
एकै पटकको युवा सेटअपमा रड्री सामेल भए लुकास (उनको एटलेटिको मैड्रिड टोली) र तिनको भाइ, यो हर्नजेज। यो क्लबको साथ छाप छाप्न Rodri र क्यानाडा भाइहरू को लागि छिटो थियो। उनीहरू सबैले अन्य 10 वर्षे उमेरका साथ लीग जित्नको लागि उनीहरुको क्लबलाई सहयोग पुर्याए।
बस एक वर्ष क्लबमा, ग्यारह, रड्रिको उमेरमा हर्नियर्स भाइहरू सँगै क्लबमा आफैले फेरि फेरि अर्को परीक्षण र एटलेटिको म्याड्रिडको युवा विभागमा नामांकन गर्न थाले। तल उनको एटलेटिको शर्टमा एक राम्रो रोरी को फोटो हो।
एरिलेटिको म्याड्रिडको साथ Rodrigo Hernandez को प्रारम्भिक वर्ष। क्रेडिट ForActivo
तीनहरू सधैं पिच बन्द र बन्द थिए, उपनाम "परिवार"।
दुखाइको बेला, लुकास र थियो क्लबमा उत्कृष्ट बनाइयो, रड्रिको विकासले आफ्नो सबै भन्दा राम्रो दिने बावजूद रोकिएको थियो।
Rodrigo Hernandez Early Career Story with Atletico मैड्रिड। को श्रेय SideHumo.
क्लबको व्यवस्थापनले भरिएको एउटा आरोप थियो कि त्यो धेरै कमजोर थियो। यस खराब कार्यसम्बन्धी समस्याले यस प्रकारको अकादमीको प्रमुख जूलियन मुनोजलाई उत्साहित बनायो, रड्रीलाई स्पेनको पूर्वी तटमा बेवास्ता गर्न उनले एफसी विलार्रियलको युवालाई सहभागी गरे।
यसका लागी, सडकको प्रसिद्धि कथा
पेन्सन प्रबन्ध गर्दै:
पहिलो, यो Rodri को लागि एक क्लब छोड्न को लागि यो आसान थिएन जहाँ उनले सफलता को सपना देख्यो। तिनका आमाबाबु र सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरूले उनलाई अनुचित व्यवहार गरे।
के तपाईलाई थाहा छ? ... उनको निस्कने समयमा, रोडिया आफैले छोटो र धेरै कमजोर थिएनन्। उहाँ 1.84 मिटर लामो थियो तर शायद त्यो समयमा, केही भौतिक शक्तिको कमी थियो।
कहिल्यै नबनाउने उपस्थिति:
Rodri कभी एटलेटिको मैड्रिड मा कभी नहीं हार दिए, त्यो उनको समर्थन को पतन भयो। स्पैनिश क्लबमा खेल्ने उनको सपना कहिल्यै सूर्यमा एक किशमिशको रूपमा सूखिएको छैन र नराम्रो जस्तो लाग्यो।
कुनै समयमा, उनको प्रार्थनाहरू जवाफ दिन थाले। रड्री 1.91 मीटर र चमत्कारिक रूपमा वृद्धि भयो, उनले शारीरिक र टेक्निकललाई पनि विकास गरे र यसैले Villarreal पहिलो टोली क्लबको साथ रहन दुई वर्ष भित्र घुमाउँदै।
रड्रिगो क्यानाडा रोड फेम स्टोरी। क्रेडिट ब्रान्ड.
सबै भन्दा ठूलो कमेड:
वर्ष 2015 थियो जब Rodri आफैले नाम बनाउन थाल्नुभयो। त्यो वर्ष, उनले यूएईए युरोपेली अन्तर्गत 19 च्याम्पियनशिप जितेर उनको स्पेनिश पक्षलाई सहयोग पुर्याए।
रड्रि प्रतियोगितामा गोल्डन ब्वाइडर विजेता सहित, टूर्नामेंट टीम को विशेषता मा6स्पेन खेलाडी थिए Asensio.
रोड्रिगो हर्नान्डेजले यूईएफए यूरोपियन अन्डर १ Champion चैम्पियनशिप जित्यो। डेलीमेलमा क्रेडिट
प्रतियोगिताले रोडीरीको वृद्धिको प्रमाण बन्छ किनभने उनी स्पेनिश भाषाको सबैभन्दा सानो र सानो उमेरमा मुकुट भएको थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… रोड्रिडको क्षमताले बललाई उनलाई सबैभन्दा रोमाञ्चक युवाहरू मध्ये एक बनायो जुन एकको रूपमा देखियो PERFECT KID कुनै मिडफील्डको आधारमा। Villarreal मा, Rodri एक मानिस र एक फुटबल दुवै बने।
यसका लागी, फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
Rodri देखेको स्पेनको सबैभन्दा सानो र सबै भन्दा सानो सम्पत्ति हो जुन एटलेटिको मैड्रिडले उनलाई अघि बढाउन गल्तीलाई पछ्याउनुहुन्छ। क्लबले क्षमा माग्नको लागि एक तरिका बसालेको छ, जो एक अनुरोध मार्फत गजल आफ्नो सपोर्ट क्लबमा फर्केर फर्किएको छ। ठीक तरिकाले 24 मई 2018 मा, Rodri को एटलेटिको म्याड्रिड एकेडेमीको इतिहासले उनको ट्राफिकको लागि विलार्रियलसँग एक सम्झौतामा पुगेर क्लबमा फर्क्यो।
Rodrigo Hernandez रिटर्न्स Atletico मैड्रिड। क्रेडिट यूरो काल्पनिक लीग.
युवा स्पानीर्डका लागि धेरै आशामा ल्याइएको राजधानीमा फर्कनुहोस्। धेरै खेलहरूमा बलियो र प्रविधिको आफ्नो कृति प्रदर्शन गरेर Rodri आफ्नो बुँदा आफ्नो पुरानो क्लबमा साबित भयो। तल भिडियो सबूतको टुक्रा हो। Tralex लाई क्रेडिट
रड्रीले महत्त्वपूर्ण वृद्धिमा एक मौसम वृद्धि गरे। आफ्नो दोस्रो स्टन्टमा एक क्यालेन्डर वर्षको साथ, उनले आफूलाई पहिले नै घरको नामको रूपमा स्थापना गरेका थिए। यो समयमा उनी यूईएफए सुपर कप क्लच गर्न आफ्नो टोलीलाई मद्दत गर्दा स्पष्ट थियो।
रड्रिगो क्यानाडा उदयमा फेम स्टोरी। क्रेडिट फ्रिकल्स-अरेली.
Rodri कि खेलाडी बनेको छ जो दुवै खुट्टा संग खेल्न सक्छ, जसले आफूलाई उच्च दबाव क्षेत्रहरु बाहिर बल को बहाली मा विशेष गरे। तल भिडियो सबूतको टुक्रा हो।
यो चित्रले युरोपमा शीर्ष क्लबहरू आकर्षित गर्यो, जसको बीचमा पेप Guardiolaको मैन सिटी। यति धेरै प्वाइन्ट साबित भएपछि, जेएनएमएक्सएक्स / एक्सएनएक्सएक्स गर्मीको सर्भिस विन्डोमा रड्रीले एटलेटि मैड्रिडलाई क्लब छोड्ने निर्णयको बारेमा थाहा पाएको थियो।
लेखन को समयमा, अफवाहहरु संग उनको सम्भावित लिङ्क माथि अवस्थित छ पेप Guardiola कसले उसलाई बुढो बदल्न चाहानुहुन्छ फर्नान्डोहो. बाकि, फुटबल प्रशंसकहरूको रूपमा, अब इतिहास हो।
यसका लागी, सम्बन्ध जीवन
उहाँको प्रसिद्धिको कारणले, सबैको होंठमा प्रश्नहरू भए।
"रोरीको गर्लफ्रेंड वा पत्नी को हुनुहुन्छ?"
"रोरी विवाहित हुनुहुन्छ?"
"के Rodri सँग प्रेमिका छ?"
Rodrigo Hernandez क्यानाडा। BDFutbol मा क्रेडिट
त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गरिरहेको छैन कि उनको सुन्दर6फुटको साथ युग लगाइएको छ र3इन्च उचाइले उनलाई केटीलाई दाखिल बनाउन सक्दैन।
तथापि, सत्यलाई भनिएको छ। लेखको समयमा, सम्भवतया लुकेको रोमांस अवस्थित छ, जसले जनताको आचरणको जाँचबाट बचाउँछ, किनभने रोडियाको प्रेमको अज्ञात प्रेमिकासँग निजी र संभवतः नाटक-रहित हो।
यसका लागी, व्यक्तिगत जीवन तथ्य
रड्रीको व्यक्तिगत जीवन जान्नको लागी तपाईंलाई आफ्नो नैतिक व्यक्तित्वको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
Rodrigo Hernandez व्यक्तिगत जीवन-क्रेडिट YouTube
सुरू गर्दै, रोड्री भनेको हो जसले जसले यसलाई स्पष्ट पारेको छ कि उनको जीवन फुटबलको बारेमा होइन। एक समृद्ध फुटबलरको रूपमा पनि, रड्री औसतको कसैलाई जस्तै जीवन बिताउन चाहन्छ। वास्तवमा, Rodrigo Hernandez पर्सनल लाइभ एक शब्दमा सारिएको छ र त्यो हो; "सामान्यता"।
आफ्नो फुटबल र अध्ययनबाट दूर, Rodri आफ्नो समय टेबल टेनिस खेल, आफ्नो कपडे धोएर, टेलिभिजन हेर्दै र सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण, आफ्नो पाक गर्दै।
Rodrigo Hernandez व्यक्तिगत जीवन- त्यो घर मा के गर्दछ। क्रेडिट ब्रान्ड.
उनको अध्ययन बिर्सनु हुँदैन, Rodri एकपटक एक पल्ट एक विश्वविद्यालय थियो माड्रिडडे डी Castellon, म्याड्रिड मा एक विश्वविद्यालय जहाँ उनले बिजनेस स्टडी र अर्थशास्त्र अध्ययन गरे।
यसका लागी, LifeStyle तथ्यहरू
ट्राफिकमार्केटको अनुसार, Rodri सँग € 80,00 मिलियनको मूल्य हो जुन सार्थक भनेको उनी एक मिलियन फुटबलर हुन्। यो तथ्यले Rodri को जीवनशैलीमा प्रशंसक अन्वेषण ल्याउँछ
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहन सिंहले भने, "उनीहरूले आफ्नो पैसा कमाउन नसक्ने बताएका छन्। रोरीले पागल जस्तो बिताउँदैनन् वा फ्लैश लाइफ लाइभ लाइभ लाइभ गर्दैन। रड्रीले आफ्ना मोटीहरूलाई फ्याक्ट्री कारहरूमा छिर्न सक्दैन। उनको कार, हालसम्म सम्म, दोस्रो पटक थियो ओपेल कोर्स जसको उनले उनले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउँदा एक महिलाबाट किन्नुभयो।
Rodrigo Hernandez Car - The Opel Corsa। टोली-बीएचपी लाई क्रेडिट
तपाईंलाई थाँहा थियो?… लालागामा खेलकुद धेरै पैसा कमाई भए तापनि, म्याड्रिडमा एक विश्वविद्यालयको आवासमा रहेर रोरी को लागी मान्छे हेर्न को लागी शोक भएको थियो।
Rodrigo Hernandez होम मा मैड्रिड। क्रेडिट ब्रान्ड.
तल एटलेटिको मैड्रिडको लागि सुपरस्टार भएपनि लालेगामा तेस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय क्लबको बावजूद यसको विश्वविद्यालय हस्टल अपार्टमेन्टमा रड्रि को फोटो हो।
Rodrigo Hernández LifeStyle तथ्य। क्रेडिट ब्रान्ड.
तपाईंलाई थाँहा थियो?… Rodri's एजेन्ट पनि महत्त्वपूर्ण छ। जब अन्य एजेन्सीहरू पैसा खोज्छन्, उनी आफ्नो ग्राहकलाई हेर्छन्। यो निश्चित छ कि Rodri आफ्नो विनम्र जीवन शैली को बदलन नहीं हुनेछ। उहाँ अझै पनि उस्तै हुनुहुन्छ र सधैँ आफ्ना साथीहरूको वरिपरी रहनेछ।
यसका लागी, पारिवारिक जीवन
रड्रीको भनाइलाई आफ्नो आमाबाबुले औसत जीवन बिताउने निश्चित र मिडियाबाट टाढा रहनुको पिचमा उनीहरूको प्रतिबद्धताको जस्तो छ। उनीहरूले उनको पारिवारिक सदस्यहरूलाई प्रदर्शन गरिसकेपछि मात्र उनको प्रस्तुतिमा अटलेटोको साथ थियो जो उनको लागि एक ठूलो क्षण थियो।
आफ्नो प्रस्तुतिको समयमा, रड्रीले 40 मित्रहरू र परिवारका सदस्यहरूसँग नजिक ल्याए जसले उनलाई आधिकारिक रूपमा एटेलिक शर्टमा राखे। दर्शकहरूको अनुसार, उनको दादीले त्यस दिनको सबैभन्दा भावनालाई प्रदर्शन गरेर उनको पोतीको सपनाको आह्वान गर्न धन्यवाद पाएको छ।
आफ्नो लोकप्रियताको मजा लिनुको बावजूद, Rodri परिवारका सदस्यहरू एक कुराको बारेमा चिन्तित छन्। अब तपाईले के भन्नु भएको छ कि एक पटक ट्रांस्पेड भयो।
रड्रिडको परिवारका सदस्यहरू एक पटक उनीहरूलाई सल्लाह दिएपछि एकपटक अर्का कोर्सा तर म्याड्रिड देखि कास्टेलोन सम्मको यात्रामा उनको सुरक्षाको लागि एक राम्रो कार किन्न सक्दैनन्। तपाईंलाई थाँहा थियो?… सुपर स्टार रड्रीले इन्कार गरे कि उनी बुझिनन् किन उनी कारमा यति धेरै खर्च गर्थे।
"वास्तवमा, एक पटक उहाँले मलाई भन्नुभयो कि केही साथीहरू राम्रो कारहरू किन्नका लागि 'पागल' थिए, सबै कुरामा ध्यान दिएर कि कारले तपाईंलाई ए देखि बी सम्म लिन्छ, त्यो सबै।"
एक चोटि एक चोटिको स्रोतले भन्यो।
यसका लागी, अन्य तथ्य
Rodrigo Hernandez अनकल्ड तथ्यहरू। दैनिक मेल र Pinterest को क्रेडिट।
लेखनको समयमा, Rodrigo Hernandezले स्पेनको शुरुवाती ग्यारेन्टीमा आफ्नो स्थानलाई ठिक पारेको छ। यो कारण हो सर्जियो Busquets, शाऊल न्युज्यूज र थियगो अल्कोटारा अझै पनि आफ्नो शक्तिका शिखरमा छन्। यो समयको कुरा हो कि यो उनीहरूलाई बाहिर जान्छ।
यसका लागी, भिडियो सारांश
कृपया तल पाउनुहोस्, यो प्रोफाइलको लागि हाम्रो YouTube भिडियो सारांश। दयालु भ्रमण गर्नुहोस्, सदस्यता लिनुहोस् हाम्रो YouTube च्यानल र अधिसूचनाहरूका लागि बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Rod Rodo Hernandez Childhood Story plus Untold जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
एल्भारो मोराटा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 24
जर्डी अल्बा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य